गर्भवतीले साइकल र स्कुटर चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? चिकित्सकको यस्तो सान्दर्भिक जवाफ – Etajakhabar
गर्भवतीले साइकल र स्कुटर चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? चिकित्सकको यस्तो सान्दर्भिक जवाफ
म गर्भवती छु । कामकाजी महिला भएकाले साइकल र स्कुटर चलाउने गरेको छु । यस्तो अवस्थामा स्कुटर चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? – एस
कामकाजी गर्भवतीहरुले राम्रो र सुरक्षित सडकमा साइकल र स्कुटर चलाउँदा केही फरक पर्दैन । तर, नेपालमा खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक ज्यादा भएकाले गर्भमा असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा साल छुट्टिने, रक्तस्राब हुने र बच्चा खेर जाने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ । स्कुटर नै नचलाउनु भन्ने सुझाव कसरी दिनु? तर खाल्डाखुल्डी र भीडभाडयुक्त सडकमा नचलाएको राम्रो । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको पछाडपट्टि बसेर यात्रा गर्नेहरुका लागि पनि यही कुरा लागू हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुने भएकाले चारपाङग्रे सवारीसाधन सुरक्षित मानिन्छ । तर, लामो दूरी यात्राका लागि सिफारिस गरिँदैन ।
गर्भवती भइसकेपछि सन्तुलिन आहारमा ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ । गर्भवती महिलालाई सामान्य अवस्थामा जस्तो आहारले पुग्दैन । वैज्ञानिक दरले नै हिसवाकिताव गर्दा नियमित दुई हजार किलो–क्यालोरीको आहार छ भने कम्तिमा ३५० किलो–क्यालोरी थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पहिलो महिनादेखि नै नियमित आहारको करिव एक चौथाई हिस्सा थप्न सुझाव दिने गरिन्छ । सन्तुलित आहार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विशेषगरी गाउँघरतिर साग र भातमात्रै ज्यादा खाएर बस्ने तर अरु खाने कुरामा वास्ता नगर्ने चलन छ । यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका पोषणहरु पुर्‍याउन सक्दैन । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटका साथै भिटामिनहरुको सन्तुलन हुनेगरी आहार दिनुपर्छ । गर्भवती महिलाहरुले फलफूल र सागसब्जी प्रसस्त खानुपर्छ । किनभने भिटामिनको मुख्य स्रोत हरियो सागपात नै हो। स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
– डा. अमृता गिरी, स्त्रीरोग तथा प्रसुति विशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २०, २०७४ समय: ८:२७:३१